Isan'andro - Famaranan-teny fototra sy mistery tsy voavaha | Vaovao IPhone
Rehefa afaka andro maromaro namakiana ny vaovao sy "nandevona" izay hitantsika tamin'ny fanolorana ilay iPhone vaovao, fotoana tsara izao hananana hevitra milamina sy kendrena ary mandanjalanja kokoa momba izay rehetra natolotr'i Apple antsika. Ny jery Apple dia nisy jiro, vaovao tsara ho an'ny mpampiasa, ary antsipiriany vitsivitsy izay tsy tianay loatra. Raha tsy misy ny fahalalana hoe tsara ny fakantsary misy ny iPhone vaovao, ary raha maharitra toy ny namboarin'izy ireo ny bateria dia holazaiko aminao ny fehin-kevitra farany nataoko.
Ho fanampin'izany dia miresaka momba ny vaovao lehibe izay niseho koa isika androany, toy ny inona ny fahatsiarovana RAM ananan'ireo iPhones vaovao, ary raha tena ampidirin'izy ireo izany enta-mavesatra izany izay tsy noresahin'i Apple ao amin'ny pass Keynote. Raha ny fanazavana, iza no iPhone nofidinao tamin'ny farany?
Podcast manadihady ny fampisehoana ny iPhone vaovao
Ny RAM an'ny iPhone 11 vaovao
Ny iPhone 11 dia manana famerenana amin'ny laoniny fa ny Apple kosa dia nanidy azy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Vaovao IPhone » Podcast » Isan'andro - Famaranan-teny fototra sy mistery tsy voavaha